Sakana tsy ahafahan’i Madagasikara manondrana any ivelany ny lafiny ara-kalitao mifanaraka amin’ny fenitra takian’ny tsena iraisam-pirenena.Anisany fepetra voalohany mampizotra ny fanondranana ny fifehezana io fenitra io. Malaza amin’ny fananana karazana episy tsara kalitao isika saingy tsy voatrandraka ny ankamaroan’izany noho ny tsy fahafantarana ny fenitra takian’ny tsena amerikanina (sécurité sanitaires des aliments).
Nampiofanina ny lalàna vaovao (food safety modernization Act) takian’ny tsena amerikanina momba ny antoka ara-pahasalaman’ny vokatra avy amin’ny sakafo ireo firenena mpikambana ao amin’ny COMESA. Tetikasa vatsian’ny USAID izy ity mba hampanarahana ny fenitra takiana amin’ny fanondrana entana any Amerika. Mpamokatra, orinasa mpanodina ny vokatra avy amin’ny sakafo sy mpanondrana eto Madagasikara no nisitraka io fampiofanana io mandritra ny herinandro izay nanomboka ny 4 martsa ary hifarana ny 8 martsa ho avy izao. Ho fitazomana ny fahafahan’i Madagasikara manondrana lavanila, jirofo, kafe, patsa be, gambas, thon, lohamenaka any Amerika no tanjon’ny fampiofanana. Ankoatra ny fampahafantarana « accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires » na SPS dia hisy ny fitsidihana ireo « laboratoires » roa eto an-toerana misahana ny antoka ara-pahasalaman’ny sakafo: « laboratoire d’hygiène des aliments et de l’environnement » (LHAE) any « Institut Pasteur de Madagascar sy ny laboratoire des aliments et de l’eau » an’ny « Centre National de la Recherche sur l’Environnement » (CNRE). Ho fanampiana ireo orinasa mpanondrana entana eo amin’ny tsena amerikanina no tanjon’ity fitsidihana ity.
‹ BEN’NY TANÀNA AMBOHITRIMANJAKA: Laharam-pamehana ny fanabeazana	› UNICEF: Hamonjy ankizy an-tapitrasany ireo fitaovam-pangatsiahana